Ntụziaka Ntụziaka bụ ebe nrụọrụ weebụ nke Actualidad Blog. Anyị website raara nye ụwa nke gastronomy, na n’ime ya ka anyị na-ewepụta echiche nke efere ndị mbụ ka anyị na-ekwu maka ihe niile metụtara isi nri na nri.
El Otu nchịkọta akụkọ nke usoro esi nri Ihe mejupụtara ya omiiko foodies enwere obi ụtọ ịkọrọ gị ọrụ ha na nka. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iso na ya, egbula oge dere anyị site n'ụdị a.
Isi nri abụwo otu n'ime ihe omume ntụrụndụ m kemgbe m bụ nwata, abụkwara m nne ịnyịnya ibu. Ọ bụ ezie na ọ baghị uru na ọrụ m na-arụ ugbu a, isi nri na-enye m ezigbo oge. M hụrụ n'anya na-agụ mba na mba nri blọọgụ, iso ruo ụbọchị nke ọhụrụ mbipụta na-ekere òkè na ezinụlọ m na ugbu a na gị, m culinary nwere.
Enwere m mmasị isi nri, ọ bụ otu n'ime ihe omume ntụrụndụ m, ọ bụ ya mere m ji bido blog, Isi nri na Montse, nke m na-ekerịta Ezi ntụziaka maka ndụ kwa ụbọchị n'ụzọ dị mfe ma dị mfe ma nwee ọ itụ.
Dịka onye hụrụ ezigbo nri n'anya, a na m ekwupụta na m bụ onye isi nri n'ozuzu ya. Na nhọrọ nke ngwaahịa na agwakọta flavors, ana m ahụ oge m nke ihe okike kwa ụbọchị. N'ebe a, a na m ekekọrịta ọkacha mmasị m nri na usoro nri, ngwakọta nke nri ọdịnala na nri mba ụwa.
Enwere m mmasị isi nri kemgbe m bụ nwata, ugbu a, a raara m onwe m nye ịme nri nke aka m na imeziwanye ihe niile m mụtara kemgbe ọtụtụ afọ, enwere m olileanya na ị ga-amasị usoro m dịka m na-achọ ịkọrọ gị.
Uche m na-emeghe oge niile ma nwee ike ịmepụta ugbu a eduru m na ụwa nke kichin. Enwere m olileanya na ị na-amasị usoro nri m ma tinye ha n'ọrụ. Ha na-atọ ụtọ!
Otu parishioner nke jiri nwayọ na Guinness biya, anọla m na-akwadebe usoro isi mkpịsị aka ịgbatị. Omenala, nke oge a, amaara m ime ihe ọ bụla! Na-agbalị na-agbalị ọhụrụ flavors, M na-atụ gị n'anya n'anya m Ezi ntụziaka dị ka m na-eme na-eme ha.